သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတစ်စက္ကန့် HARD DRIVE ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို - HARD DISK ကို - 2019
"ပင်မမျက်နှာပြင်" windose 10 အတွင်းဒြပ်စင်အခြို့ operating system ကိုအရင်ဗားရှင်းကနေချေး။ ပုံမှန်စာရင်း Windows7ကိုထံမှယူနဲ့ Windows 8 နှင့်အတူခဲ့သည် - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအုပ်ကြွပ်။ အသုံးပြုသူကအလွယ်တကူမီနူးအမြင်များ၏ကြည့်ပွောငျးလဲနိုငျ "Start" built-in သို့မဟုတ်အထူးဆော့ဖ်ဝဲ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows 8 မှာ "Start ကို" ခလုတ်ကိုပြန်လာ4နည်းလမ်းများ
Windows 10 ကိုရှိ "Start ကို" မီနူး၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲ
ဤဆောင်းပါးသည်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုပြောင်းလဲအချို့ applications များဆွေးနွေးကြမည် "ပင်မမျက်နှာပြင်"အဖြစ်ကသိပ်ဆော့ဖျဝဲခြင်းမရှိဘဲထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုရှင်းပြခဲ့လိမ့်မည်။
Method ကို 1: StartIsBack ++
StartIsBack ++ - လူအတော်များများစိတ်ကြိုက် tools များရှိကြောင်းအခကြေးငွေ-based ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု "Desktop ကို" အဘယ်သူမျှမ interface ကိုမီထရိုရှိသေး၏။ installation ကိုမပြုမီ, ကဖန်တီးမှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည် "Restore point တစ်ခု။ "
StartIsBack ++ တရားဝင် site မှ Download
, ပရိုဂရမ်အားလုံးကိုပိတ်ပြီးဖိုင်များအားလုံးသိမ်းဆည်းပြီး StartIsBack ++ ထည့်သွင်းပါ။
သစ်တစ်ခု interface ကိုတင်ထားရန်မိနစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်နှင့်သင်တစ်ဦးအမြန်သင်ခန်းစာပြသပါလိမ့်မည်။ ရန် scroll "Customize StartIsBack" parameters တွေကိုအသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲဘို့။
သင်တစ်ဦးခလုတ်ကိုသို့မဟုတ် menu ကို၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူနည်းနည်းစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် "Start".
Method ကို 2: Menu ကို X ကို Start
Menu ကို X ကိုအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့တိုးတက်လာသော menu ကိုအဖြစ်သူ့ဟာသူ positioned ထားပြီးစတင်ပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲ paid နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဗားရှင်းရှိပါတယ်။ Next ကိုရှိမရှိသိချင်ရင် Start Menu က X PRO ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Start Menu X ကိုတရားဝင် site မှ Download
လျှောက်လွှာ Install လုပ်ပါ။ ယင်း၏အိုင်ကွန်စနစ်ဗန်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ , မီနူးကိုသက်ဝင်ပေါ်မှာ click နှိပ်, right-click လုပ်ပြီးရွေးဖို့ " ... မီနူးပြရန်".
ဤတွင်ဖြစ်ပါသည် "Start" default settings ကိုအတူ။
, သင့် setting များကိုပြောင်းလဲပစ်လျှောက်လွှာအိုင်ကွန်၏ Context Menu ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ "ဆက်တင်များ ... ".
Method ကို 3: Classic Shell
ဂန္ထဝင် Shell ဆိုသည်မှာယခင်အစီအစဉ်များကဲ့သို့ Menu ထဲမှာကြည့်ပြောင်းလဲ "Start"။ ဂန္ထဝင်ကို Start Menu ကို (menu ကို: ဒါဟာသုံးအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည် "Start"), ဂန္ထဝင် Explorer ကို (အပြောင်းအလဲများ toolbar ကို "Explorer ကို"), ဂန္ထဝင် IE ကို (လည်း toolbar ကို, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးစံ web browser ကို Internet Explorer ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့။ နောက်ထပ် Classic Shell အားသာချက်ဆော့ဖ်ဝဲလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Classic Shell program ကိုတရားဝင် site မှ Download
Method ကို 4: Windows 10 ကိုစံအဆောက်အ
အဆိုပါ developer များဟာကြည့်ပြောင်းပေးဖို့ built-in tools များပေးအပ်ကြပါပြီ "ပင်မမျက်နှာပြင်".
ဆက်စပ် menu ကို Call "Desktop ကို" နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Personalisation စာ".
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "Start"။ စသည်တို့ကိုအစီအစဉ်များ, display ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, ဖိုလ်ဒါ, အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
tab ကို "အရောင်များ" အရောင် setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရှိသည်။ အဆိုပါ slider ကိုရွှေ့ Start ကို "ထဲမှာ Show ကိုအရောင်" "menu ကို ... " တစ်ဦးတက်ကြွပြည်နယ်ဖြစ်သည်။
မီနူး "Start" ဒါဟာတူပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုဖွင့်လိုလျှင် "၏ ... အလိုအလျောက်ရွေးချယ်ရေး"ထိုအခါစနစ်အရောင်တက်ကောက်ပါလိမ့်မယ်။ လင်းမြင်သာမှုနှင့်အမြင့်မားသည့်ယှဉ်တစ်ဦး setting ကိုလည်းရှိပါသည်။
မီနူးမှာ, လိုအပ်သောအစီအစဉ်များကို detach သို့မဟုတ်ပူးတွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရုံကို item ပေါ်တွင် Context Menu ကတက်ကိုခေါ်ပါ။
သင်ရုံညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကျော်ပျံဝဲဖို့လိုအပ် tile ကို၏အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန် "အရွယ်အစားပြောင်းပါ".
တစ်ဦးကို item ရွှေ့ဖို့, လက်ျာအရပ်မှလက်ဝဲလက် mouse ကိုခလုတ်နဲ့ဆွဲချကိုင်ထားပါ။
သင်အုပ်ကြွပ်၏ထိပ်ပေါ်တွင် cursor ပျံဝဲလျှင်, သင်မှောင်မိုက်ဒဏ်ချက်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အဲဒါကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်, သင်သည်တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များခေါ်နိုင်ပါတယ်။
အခြေခံနည်းလမ်းများကိုမီနူးအမြင်ပြောင်းလဲစေရှိပါတယ်ဖော်ပြထားပါပြီ, "Start" Windows 10 ကိုပါ။